Ejipta: Hitan’ilay mpamily Taxi tamin’ny alalan’ny facebook ny tompon’ny fakantsary very · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Marsa 2011 4:30 GMT
Vakio amin'ny teny македонски, Français, Italiano, srpski, বাংলা, عربي, 繁體中文, 简体中文, 日本語, Español, English
Inona no mety ataonao raha mahita fakantsary ianao, ka hamerina azy amin'ny tompony? Tamin'ny fomba ejipsiana no nanaovan'ilay mpamily taxi ejipsiana iray azy ka nampiasa ny aterineto izy – ary nivaly vetivety izany.
Niangavy ilay mpandeha nahita ny fakantsary hamoaka ny sasantsasany amin'ny sary ao anatiny amin'ny aterineto ilay mpamily antsoina hoe Abdel Hameed Tawfiq. Nitantara ilay mandeha izay mbola mpianatra antsoina hoe Asmaa Mostafa:
Tamin'ny voalohany rehefa niangavy ahy hamoaka amin'ny aterineto ny sarin'ilay mpizahantany hita tao amin'ny fakantsary ilay mpamily antsoina hoe Abdel Hameed, dia nanapa-kevitra aho ny hifandray tamin'ny takelaka maro izay maha-mpikambana ahy hifanampy amiko, sady nanampy ahy sy nandrisika ahy ary nanohana ahy tamin'ity raharaha ity ireo takelaka isan-karazany ireo. Namoaka ny sarin'i Marcus tamin'ny takelak'izy ireo aho. […] Taorian'izay moa dia nadefa hafatra tamina mpiara-miasa iray izay nilaza tamiko hanokatra takelaka Facebook manokana momba ity raharaha ity aho. Nanokatra takelaka [antsoina hoe mitady ity olona ity i Ejipta iray manontolo] aho ary nanasa olona [hiditra ao], ary nanasa ny mpikambana ao aminy hiditra ao amin'ny takelaka ihany koa ireo takelaka efa nifandraisako. Ny tanjon'ny takelaka nossokafako moa:
1. Hamerina ny zavatra very amin'ny tompony
2. Hamerina izany amin'ny fanaon'ny vahoaka ejipsiana (tsy nieritreritra velively ny handefa azy amin'ny ambasady aho hifanarahana); Nanantena aho fa isika izay miantso, mitady ary mifampiresaka dia hahita tampoka azy, ary tena nino aho saingy tsy vetivety araka izay nitranga, nieritreritra aho fa mety haharitra am-bolana ny fikarohana.
3. Hanatsara ny endrik'i Ejipta sy ny ejipsiana any ivelany; tsy maintsy averina amin'ny tompony, tsy anavahana firenena niaviana, ny zavatra very ary miezaka izahay ny ho tafapaka any amin'ny tompon'ny fakantsary. Ny tena nampazoto anay dia ny fahafantarana azy ho tsy Ejipsiana. Tsy tsara loatra manko ny lazantsika any ivelany; misy mpivarotra Ejipsiana manambaka ny mpizahatany ka miantraika amintsika rehetra izany zavatra izany.
4. Ny tanjonoa goavana indrindra dia ny hanatratra ny rehetra amin'ity takelaka ity, vao manomboka isika ary matoky ihany koa. Ilaina ampahafantarina ny rehetra fa voaaro ny olona any Ejipta. […]
5. Tsy firenena mihemotra feno jiolahimboto sy korotana i Ejipta, Ejipta izany dia i Abdel Hameed sy ireo izay mankasitraka azy, ary tsy misy zava-dratsy hahasarona ny tsara ao anatinay na oviana na oviana.
Marcus Abdullah Bregenzer, takelaka facebook mitady ity lehilahy ity i Ejipta iray manontolo
Ora iray sy telo minitra monja taorian'ny nananganana ny takelaka dia nisy hafatra nalefan'i Mohamed Abu Seda, nilaza fa fantany io olona hita amin'ny sary io, lehilahy Soisa iray antsoina hoe Marcus. Nitady fifandraisana tamin'i Monzer Mohamed Rashad i Mohamad, fa ilay io no naman'i Marcus any Soisa, ary vetivety fiana dia nandefa hafatra indray i Monzer miaraka amin'ny sariny miaraka amin'i Marcus. Avy eo moa dia namokatra lahatsary nitantarany ny tantara iray manontolo ry zareo (Nanomboka tamin'ny teny Arabo i Monzer ary i Marcus – antsoina ihany koa hoe Abdullah – indray nanohy tamin'ny teny anglisy):
Mbola nahazo mpanaraka maro ihany ny takelaka facebook, ary lasa ampiasaina hampalaza an'i Ejipta ho milamina fitsidihan'ny mpizahantany. Araka izany nolazain'i Monzer ao amin'ny lahatsorany:
Omaly nahomby tamin'ny fitsapana ny demokrasia i Ejipta, androany indray tamin'ny fandriampahalemana